» राजु केसी र डिला बिक नै हो त विजेता ?
राजु केसी र डिला बिक नै हो त विजेता ?
९ आश्विन २०७८, शनिबार ०८:१७
मकवानपुर, ९ असोज । नेपालकै चर्चित दोहोरी रियालिटी शो ‘दोहोरी च्याम्पियन’ को उत्कृष्ट ४ मा पुग्ने तेस्रो जोडीको घोषणा यही शनिबार हुँदैछ । गएको शनिबार राजु केसी र डिला बिकसँग राजेन्द्र पाठक र मिना नेपालले दोहोरी भिडेका थिए । यी दुबै टिमले गत साता कडा दोहोरी भिडन्त गरेका थिए । दोहोरी भिडेका राजु र डिला दोहोरीको दुनियाँमा चर्चित छन् । राजु र डिलालाई यस अघि नै शोमा सहभागी भएका प्रतियोगीहरुले उत्कृष्ट ५ सम्म पुग्ने बलियो दाबेदार भएको बताएका थिए ।
अहिले दोहोरी च्याम्पियनमा भिडिरहेका कतिपय जोडीहरुले राजु र डिलासँग दोहोरी भिड्न डर लाग्ने भन्दै प्रतिक्रिया समेत दिएका थिए । समग्रमा हेर्दा उनीहरुले राजु र डिलालाई शोको विजेता दाबेदारका रुपमा पनि चर्चा गरेका थिए । यसअर्थमा यो हप्ता राजु र डिलाको पक्षमा रिजल्ट आउला वा नआउँला भनेर जान्न दर्शक श्रोताहरु ईच्छुक छन् । तपाईको विचारमा के राजु र डिला सेमिफाईनल अर्थात उत्कृष्ट ४ मा पुग्लान् जस्तो लाग्छ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् ।
दोहोरी च्याम्पियनको उत्कृष्ट ८ मा पुगेका पाँचौँ जोडी हुन् राजु केसी र डिला बिक । उनीहरुले यसअघि उत्कृष्ट १६ को दोहोरी भिडन्तमा चर्चित जोडी बबिता बानियाँ जेरी र शंकर क्षेत्रीसँग दोहोरी भिडेका थिए । यो दोहोरी भिडन्तमा राजुलाई दुई जना निर्णायकहरुले फाईभ स्टार प्रदान गरेका थिए । त्यस्तै उनलाई निर्णायक प्रजापति पराजुलीले फो स्टार र सिता थापाले थ्री स्टार प्रदान गरेका थिए । डिलालाई निर्णायक चन्द्र शर्माले फो स्टार र अन्य निर्णायकहरुले थ्री स्टार प्रदान गरेका थिए ।
उनीहरुले यसअघि उत्कृष्ट २४ को दोहोरी भिडन्तमा निर्णायकहरुबाट ५८४.५ अंक प्राप्त गर्दै १६.५ अंकको अन्तरमा दोहोरी भिडन्त जितेका थिए । यो उत्कृष्ट २४ को क्रममा सर्वाधिक बढी अंकका आधारमा हारजित भएको दोहोरी भिडन्त थियो । डिला सुर्खेतकी र राजु स्याङ्जाका हुन् । हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री–